Trump Iyo Biden Oo Yeeshay Dooddii Ugu Kululeed
Wednesday September 30, 2020 - 17:54:42 in Latest News
"Madaxweynihi ugu xumaa oo abid soo mara dalka Mareykanka."
Madaxweyne Donald Trump iyo musharraxa doorashada kula loollamaya ee Joe Biden ayaa yeeshay dooddi ugu kululeed oo muddo sanadaha ah laba musharax oo aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo u tartameyso dhexmarta.
Labada dhinac oo ay wajiyadooda ka muuqatay xanaaq iyo caro, doodda ugu adag waxay ku dhexmartay arrima ay ka mid yihiin cudurka safmarka ee faayraska corona, dhaqaalaha, mudaharaadyada rabshadaha watay ee dalkaasi ka dhacay iyo arrima la xidhiidha qoysaskooda.
Doodda ka dhcaday Cleveland, Ohio ayaa ahayd dooddi ugu horreysay oo ka mid ah seddexda dood oo ay labada musharraxa yeelanayaan codbixinta doorashada ka hor.
Aragti dhiibashada ay dadweynaha sameeyeen ayaa muujineysa in Mr Biden uu xoogaha uu uga sarreeyo Mr Trump, iyada oo ay doorashada ka harsan tahay 35 maalmood oo keli ah.
Dooddi habennimadi talaadadi xalay ku dhexmartay Jaamacadda Case Western Reserve waxay ahayd mid ay dadku kala fogaanshaha looga hortagayo faafidda corona ku meel mariyeen, iyada oo laga booday dhaqanki soo jireenka ee ahaa iney labada musharraxa doodda ka hor iyo kaddibba is gacan qaadaan.
Doodda labada musharrax dhexmartay oo mararka qaar aflagaaddo iyo hadalla kulul ay isku dhaafsanayeen Mr Biden oo 77 jir ah, Mr Trump oo 74 jir ah wuxuu ku eedeeyey inuu cambaareyn cunsuriyadda dadka caddaanka ee aaminsan sarreynta midabka cadaanka isaga oo ugu yeeray "Eyga Putin"..
Wuxuu sida oo kale Biden uu Trump ku tilmaamay: "Madaxweynihi ugu xumaa oo abid soo mara dalka Mareykanka."
Doodda oo mararka qaar shaqsiyadda qofka ku saabsaney, Mr Trump wuxuu soo bandhigay Mr Biden wiilkiisa inuu daroogada isticmaalo.
Maxaa keenay daqiiqadaha ugu horreeyey ee furitaanka doodda iney murmaan?
Labad musharrax marki ay ka doodayeen daryeelka caafimaadka, Mr Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga xubinka la loollamaya wuxuu ku eedeeyey inuu xisbigiisa u horseedayo inuu noqdo xisbi hantiwadaag isagoo leh: "Waa ku xukumi doonaan adiga, Joe, taas waad ogtahay."
"Wakhti xaadirkan waxaan ka mid ahay Xisbiga Dimuqraadiga," ayuu Mr Biden ugu jawaabay.
Mr Biden oo hadalka qaatay wuxuu yiri: "Heshiisku wuxuu yahay: wax kasta oo uu hadda ka hor idiin sheegay waa been."
"Aniga halkan uma joogo inaan beentiisa xasuusto. Cid weliba wey ogtahay inuu beenloow yahay."
Mr Trump oo u jawaabay Biden wuxuu yiri: "Joe, waxaad tahay beenloow."
Faayraska Corona maxay ka yirahdeen?
Mr Biden wuxuu maamulka Trump uu ku eedeeyey sida xun uu u maareeyey cudurka safmarka inuu sababay iney dhintaan 200,000 oo muwaaddiniin Mareykan ah.
"Dad badan ayaa dhintay dad badanna geeri ayey qarka u saaran yihiin hadii aan la qaadin tallaabboyin degdeg ah oo waxtar leh," ayuu yiri Mr Biden.
Qaybta sharciga iyo kala dambeynta maxay ka yirahdeen?
Mr Biden ayaa sheegay: "Kani waa madaxweyne marweliba adeegsado ficillo abuuro neceyb cunsuriyad iyo kala qaybsanaan bulsho oo cunsiriyad ku saleysan"
Mr Trump wuxuu yiri: "Kuma dhawaaqi kartid ereyga 'hirgelinta sarreynta sharciga' sababta oo ah haddii aad ereyadaasi adeegsatid waxaad waayeysaa dhammaan taageerayaasha siyaasaddooda bidixda tahay.
Xiriiriyaha doodda ayaa Mr Trump weydiiyey inuu diyaar u yahay inuu cambaareeyo caddaanka aaminsan inuu midabkoodu sarreeyo
"Waa hubaal, ayuu madaxweynaha. "Waxaanna rabaa inaan sidaa sameeyo."
"Sidaa samee mudane," ayuu yiri xiriiriyaha barnaamijka.
Maxay yihiin waxyaabihi foosha xumaa ee dhacay?
Dooddi ugu kululeed ee carada wadatay waxay labada musharrax dhexmaray marki la soo hadal qaaday arrima la xidhiidha qoysaskooda.
Inta ay doodda socotay Madaxweyne Trump wuxuu soo hadal qaaday Hunter Biden oo ah wiil uu dhalay musharraxa la loollamaya inuu maalqabeen Ruushka u dhashay uu ka qaatay $3.5 malyan oo doolar, isaga oo soo xigtay xog uu shaaciyey xubin aqalka senetka ku matala xisbiga Jamhuuriga.
Balse Mr Biden eeddaasi dhinac ayuu isaga dhigay.
Xiriiriyaha doodda siduu doodda u hogaminayey?
Labada musharrax markasta oo ay isku buuqaan dood iyo hadal isku tuurtuur ay dhex mareyso Mr wallace mar ay doodda socotay wuxuu madaxweynaha ugu baaqay inuu doodda soo faragelin.
Xiriiriyaha Fox News wuxuu yiri: " "Waxaan u maleynayaa in dadweynaha si fiican looga adeegi lahaa haddii ay labada musharraxba ay ku wada hadlaan si aan faragelin badan laheen oo ismaqal ku dheehan. Waxaan kaa codsanayaa mudane, inaad saa sameyso."
Mr Trump ayaa ku jawaabay: "Waayahay, isaguna sidaa ha sameeyo."
Doodda labada musharrax ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka dhex martay xalay ayaa ahayd tii ugu adkeyd iyada oo ay dorashada madaxweynanimada ee bisha November dhaceyso ay ka harsan yihiin 35 maalmood oo keli ah.